Faaidada Shirkadda DP World Oo 28% Korortay Sanadkii Lasoo Dhaafay
Shirkadda DP World oo ah shirkad bixisa adeegyada dekedaha ayaa maanta soo bandhigtay faaiidadii shirkadda ee sanadkii lasoo dhaafay ee 2016, waxaana faaiidada shirkadda ay korortay 28% marka loo eego sanadkii ka horreeyay ee 2015.
Shirkadda ayaa soo tabisay $1.13 bilyan faaido saafi ah oo la helay sanadkii lasoo dhaafay halka sanadkii 2015 ay shirkadda soo tabisay $883 bilyan oo faaido saafi ah.
Warbixintan ay maanta soo saartay shirkadda DP World waa markii ugu horreysay oo ay shirkadda soo tabiso faaido ka badan $1 bilyan. Waxaana arrintan loo sababeynayaa shirkadda oo ku fiday daafaca caalamka iyada oo weli dooneyso in ay kordhiso wadamada ay ka howl-gasho.
“Sanadkan 2017 waxaa la filayaa in dhaqaalaha dunida uu la kulmo cadaadis iyo caqabado fara-badan, sidaa darteed waxaan sanadkan cusub ku bilawnay dhiirogelin xooggan waxaana rajeyneynaa in aan sii kobcino saamiga aan suuqyada caalamka ku leenahay” sidaa waxaa yiri Binu Suleymaan oo ah madaxa ugu sarreeya ee DP World.
Bin Suleymaan ayaa sidoo kale sheegay in DP World ayaa sidii wadi doonto habsami u socodsiinta howlaha iyo dadaalada ay hadda waddo.
Gudiga ugu sarreeya ee DP World ayaa soo jeediyay in la kordhiyo lacagaha faaiidada ah ee ay helayaan saamileyda si loo dhiirogeliyo maalgashiyada shirkadda ay heleyso.
DP World ayaa sidoo kale sheegay in ay filayaan in ay $1.2 bilyan ku bixin doonaan dhisidda xarumo cusub iyo maalgashi wadamo hor leh sida Imaaraadka, Canada, Somaliland, Senegal iyo Ingiriiska.